Kubhururuka kutanga kwaNyamavhuvhu: Seychelles inonyora akanakisa manhamba ekusvika kwevaenzi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Kubhururuka kutanga kwaNyamavhuvhu: Seychelles inonyora akanakisa manhamba ekusvika kwevaenzi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Israel Breaking News • nhau • Russia Kuputsa Nhau • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Seychelles nhamba dzevashanyi
Kumaka chimwe chiitiko chegore, uye kutanga kwekubhururuka kusvika Nyamavhuvhu, nzvimbo yechitsuwa yakarova zviri pamutemo bhawa revashanyi makumi masere, chimwe chiratidzo chakanaka chekudzoserwa kweindasitiri yekushanya muSeychelles.
Sezvo kufamba kuchizotangazve muEurope, vanobatana veko munharaunda yeIndian Ocean chitsuwa kuenda kune tarisiro yekuona kusimudzira muvashanyi kubva kumisika yavo yechinyakare kuWestern Europe.
Pakati pevhiki 37 ye2021, rekodhi 9,000 vashanyi yakacherechedzwa munzvimbo yavaienda.
Misoro yepamusoro mitanhatu inotungamira yeSychelles yegore kubva Nyamavhuvhu 6, 15, iRussia, UAE, Israel, Germany, France, neSaudi Arabia.
Kuverenga nhamba inoshamisa yevashanyi 10,413 mumavhiki maviri, Seychelles yakagamuchira mushanyi wayo 2 wegore muna Nyamavhuvhu 76,737, 8, uye mushanyi wayo 2021th muna Nyamavhuvhu 82,026, iine 15,2021% yevanosvika, yakanyorwa mushure mechikamu chekupedzisira che kuvhurazve kwayo kushanya munaKurume 96.
Pakati pevhiki 37 ye2021, rekodhi 9,000 vashanyi yakacherechedzwa munzvimbo yavari kuenda, ingori chiuru chete pasi peyakare pre-denda re2019 avhareji.
Vashanyi 5,289 XNUMX vakaburuka muSeychelles mukati mevhiki yechipiri yaNyamavhuvhu 2021 nekuwedzera kunoonekwa kubva kuFrance, paine vashanyi mazana masere nemakumi masere nevanosimudzira vanosvika muvhiki yaNyamavhuvhu 807 kusvika 9, 15.
Sezvo kufamba kuchizotangazve muEurope uye nyika dzichizorodza zvirambidzo zvavo zvekufamba, vanobatana munharaunda munharaunda yekuIndian Ocean chitsuwa vane tarisiro yekuona kuwedzera kwenhamba yevashanyi kubva kumisika yavo yechinyakare kuWestern Europe.
Mai Sherin Francis, Munyori Mukuru Wekushanya, akataura kuti huwandu hwazvino hunokurudzira zvikuru, sezvo zvichiratidza fungidziro dzakaitwa na Tourism Seychelles pakutanga kwegore kugamuchira pakati pe111,000 ne189,000 vashanyi muna 2021.
“Kudiwa kwekufamba kunoramba kwakakwira kunyange vafambi vachiri kutarisana nekusaziva chokwadi. Nyamavhuvhu yatanga nezwi rakanaka rekuenda kwedu, tasvika kusvika mazana manomwe evashanyi pazuva uye nhamba dzinoramba dzakadzikama. Tourism Seychelles iri kutarisira nhamba dzinovimbisa dzemwedzi inotevera. Isu tiri munzira yekuzadzisa edu 700 ekushanya kusvika tarisiro. Ndine chokwadi chekuti nekuedza kwechikwata chedu chekushambadzira uye vatinoshanda navo pakufamba, chikamu chechipiri chegore chichava mukana uri nani kuSychelles yekuvandudza huwandu hwayo hwekuuya kwevaenzi uye mari yekushanya, "vakadaro Mai Francis.
Misika mitanhatu yepamusoro yeSychelles yegore kusvika 15 Nyamavhuvhu 2021 iRussia ine 17,228 14,178 vashanyi inoteverwa neUnited Arab Emirates (UAE) neIsrael ine 7,086 uye 5,122 vashanyi zvakateerana, Germany ine vashanyi 4,276, France ine vashanyi 3,166 uye pakupedzisira Saudi Arabia ine XNUMX XNUMX vashanyi.
Kuenda kwacho kuri kupihwa nendege dzese nevabatsiri venhandare pfumbamwe vanosanganisira Emirates Airlines, Qatar Airways, Aeroflot, Etihad Airways, Edelweiss, Ethiopian Airlines, Turkish Airline, Kenya Airways pamwe nendege yendege yeAir Seychelles.